Tartan dhexmaraya 18-ka gobol ee Somalia oo ka furmaya Kampala + Sawirro | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Tartan dhexmaraya 18-ka gobol ee Somalia oo ka furmaya Kampala + Sawirro
Tartan dhexmaraya 18-ka gobol ee Somalia oo ka furmaya Kampala + Sawirro
(Kampala) 30 Juun 2018 – Dhowaan magaada Kampala ee wadanka Uganda waxaa ka furmi doona tartan kubadda cagta ah oo u dhaxeeya caasimadaha 18-ka gobal ee Somalia. Tartankaan waxaa soo agaasimay jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Uganda, waxaana ciyaari doona caasimadaha 18kii gobal ee Somalia.
Dhallinyarada ku ciyaareysa magaca Muqdisho iyo magaca Dhuusamareeb ayaa xildhibaanka uga mahad celiyay dhiiri galintiisa wanaagsan ee uu mar walba la garab taagan yahay qeybaha kala duwan ee bulshada. Tartanka ayaa furmi doona 14ka bisha July.
Previous articleChelsea oo midkood doonaysa Alisson & Donnarumma
Next article“In Qalbi Dhagax lasii daayo waa codsi ka yimid dowladda Somalia, mana jiro midow ka dhex dhacaya Somalia & Ethiopia” – Danjiraha Itoobiya